၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် (၇)နေ့ သားသမီးများ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း - YOYARLAY Digital Media and News
Published: December 28, 20198:24 pm Updated: 8:27 pm
ဆရာကင်္ကသူရဲ့ စန္ဒသူရိယ နက္ခတ္တဝေဒ ဟောစာတမ်းကို ရိုးရာလေး ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၇)နေ့ သားသမီးများအတွက် တွက်ချက် လမ်းညွှန် ပေးထားမှုကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် အကြံအစည်သစ်များ ဆောင်ရွက်ရမည့် နှစ်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများ ရှေ့ဆုံးမှ ဦးဆောင်လုပ်ရမည်။ (၁၄.၄.၂၀၂၀)မှစ၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလောတကြီး မလုပ်သင့်ပါ။ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ချိခြင်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ခြင်း၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အထည်အအလိပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက် သွယ် ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် တီထွင်ပညာများဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်း၏။ အများ သဘောတူညီမှုကြောင့် လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ရမည်။ တောင်အရပ် သို့ရေလမ်း ခရီးသွားခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ကား၊ အခန်းအလဲအလှယ်အပြောင်းအလဲများရှိမည်။ နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးများအတွက် စိတ်ပူရခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း၊ အတွင်းလူများအတွက် ပြဿနာများ ဖြေရှင်းပေးရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် စနေနှင့် အင်္ဂါသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဂရုစိုက် ပေးရမည်။ ပျိုရွယ်သူများ မိမိမေတ္တာရေး အပေါ်၌ လေးလေးနက်နက် တန်ဖိုးထားသူများနှင့် တွေ့ကြုံရမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ တစ်ဦးနှစ်တစ်ဦး မယုံ ကြည်စရာများဖြစ်မည်။ နိုင်ငံရပ်ခြား သို့ ပညာ သင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ ဝင်လာတတ်သည်။ စိတ်ပျံ့လွင့်နေမည်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ စာကြည့်စာဖတ်သော အချိန်များတွင် အနှောင့်အယှက် တစ်ခုခု ဝင်လာတတ်သည်။ ကျန်းမာရေး တွင် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင် ရာ ရောဂါများ ခံစားရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များ ညံ့လာပါက စနစ်တကျကုသမှုခံယူသင့်သည်။
ယတြာ။ ။ မိမိမွေးနေ့တွင် အုန်းညွှန့်၊ သြဇာညွှန့်၊ သပြေညွှန့်၊ အဖြူရောင်မေမြို့ပန်း(၅)ပွင့်နှင့် ခေါက်ဆွဲထုပ်၊ ဖရုံယို၊ ဆီးယိုထုပ်များဘုရားတွင် ကပ်လှူပေးပါ။
အကျိုးပေးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (အ၊ ပ၊ က၊ ခ) (ဝ၊ ၂၊ ၄၊ ၇)
တနင်္လာသားသမီးတို့သည် လုပ်ငန်းခွင့်တွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတတ် သည်။ သို့သော် အကြီးအကဲများ၏ အားပေးထောက်ခံမှုများရရှိမည်။ အပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးများ နှင့်လုပ်ငန်းခွင့်များဆောင်ရွက်ရတတ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရွှေထည်နှင့်စက်အပိုပစ္စည်း များ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းများမှ အမြတ်အစွန်းရမည်။ အပျော်အပါး နှင့် လူနေထူထပ်သောနေရာများ သွားလာရာတွင် ပြဿနာများဖြေရှင်းရကိန်းရှိသည်။ ဆိုင်းငံ့ရပ်တန့် ထားသော လုပ်ငန်းများသက်ဝင်အောင် လုပ်ကိုင်ရမည်။ အိုးအိမ်နေရာဆိုင်ခင်း ကိစ္စ များအတွက် စကားပြောဆိုမှုရှိပြီး ဆောင်မြင်မည်။ ယာဉ်နှင့်မတော်တဆထိခိုက်မှု အန္တရယ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသ ရသော အနာရောဂါများခံစားရတ်သည်။ ဘုရားဖူး ခရီးသွားလာရ ကိန်းရှိ သည်။ လက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းချုပ်ဆိုခြင်း၊ အာမခံခြင်းကိစ္စများတတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပေးရမည်။ ပျိုရွယ်သူများ မိမိစိတ်ဆန္ဒနှင့် တိုက်ဆိုင်မှုဝေးကွာခြင်းများ ခဏခဏ ပေါ် လာမည်။ ဝေးကွာနေသူများပြန်လည် ဆုံစည်းရကိန်းရှိသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ သားသမီးရတနာထွန်းကားပြီး သတင်းကောင်းကြားရ တတ်သည်။ ဆွေမျိုးသားချင်းများ အတွက် လူမှုရေး အပူသောကများ ဝင်လာတတ်သည်။ ပညာရေး တွင် ဝီရိယရှိမှမိမိမျှော်မှန်းသော ပညာရပ်ကို ဆည်းပူးခြင်းရမည်။ လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ပညာရေးနှောင့်နှေး တတ်သည်။ ကျန်းမာရေး တွင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲခြင်း၊ မီးယပ်ရောဂါ၊ သွေားအားနည်းခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ရေချိုးမှားခြင်းဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ။ ။ မိမိမွေးနေ့တွင် စပယ်ညွှန့်၊ ခရေညွှန့်၊ ကန်စွန်းညွှန့်၊ အဖြူရောင်ဂန္ဓမာပန်း၊ သစ္စာပန်း (၅)ပွင့်ဘုရားပူဇော်ပေးပါ။ ဆီမီးသက်စေ့ပူဇော်ပေးပါ။ သရက်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ ဖျော်ရည်တို့ကို ဘုရားတွင်ကပ်လှူပေးပါ။
အကျိုးပေးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ည) (၁၊ ၉၊ ၂၊ ၄)
အင်္ဂါနေ့သားသမီးများ ယခုနှစ်တွင် ပေါ်ထွန်းလာသည့်အကြံများ ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကိစ္စ ရပ်များရှေ့တိုး လုပ်ကိုင်ရင်းတက်လမ်းများ ရရှိနိုင်မည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပြိုင်ဘက်များ၏ အနှောင့် အယှက်ကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်တတ်သည်။ စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဖန်စီ လုပ်ငန်းများ အကျိုးခံစားရမည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ ချေးငှားခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အကျိုးအမြတ် ရရှိမည့်နှစ် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် တနင်္လာနှင့် ကြာသပတေးသား သမီး များနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း များ အထူးဂရုစိုက်ပေးပါ။ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးများ၏ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီပံ့ပိုးရခြင်းများ ကြုံရမည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမချင်းစကားများမည်။ (၁၄.၆.၂၀၂၀) မှစ၍ အရာရာတွင် သတိနှင့် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ မိမိရည်မှန်းချက်အတွက် ပျော်ပါးလိုက်စားမှုများ ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။ အလုပ် နှင့် ပတ်သက်၍ ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူး၊ ချီးမြှင့် မြှောက်စားမှုများရှိမည်။ ဖုန်းနှင့်ဥစ္စာဓနများကျပျောက်ခြင်း များရှိမည်။ အနောက်အ ရပ်သို့ ရေလမ်းခရီးသွားခြင်းရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။ မမျှော်လင့်ဘဲ ငွေကြေး များဝင်လာခြင်း၊ စက်ပစ္စည်း များဝယ်ယူခြင်းများရှိမည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် တနင်္လာနှင့် ကြာသပတေးသားသမီးများနှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အထူးဂရုစိုက်ပေးပါ။ အချစ်ရေးတွင် စန်းပွင့် နေလိမ့်မည်။ တဖက် သတ်အချစ်ရေးမျိုးများနှင့် ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ပတ်ဝန်း ကျင်သွေးထိုးမှုကြောင့် မိသားစုတွင် ပြဿနာဖြစ်ခြင်း၊ မိမိယုံကြည်မှုဖြင့် သာယာမှုကိုရယူသင့် သည်။ အတတ်ပညာ၊ ပြည်ပပညာလေ့လာနေသူများ ယခုနှစ်တွင် လိုရာပန်းတိုင်သို့ ဆွတ်ခူး နိုင်မည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အသည်းရောဂါ၊ ဆီးရောဂါ၊ အင်္ဂါဇာတ်အစရှိသောရောဂါ၊ ကျီးပေါင်း၊ လေရောဂါများဂရုစိုက်ရမည်။
ယတြာ။ ။ မိမိမွေးနေ့တွင် အနီရောင်နှင်းဆီပန်း၊ စိန်ခြယ်ပန်း၊ ဒန်းညွှန့်(၁၁)ညွှန့် ဘုရားပူဇော်ပေး ပါ။ နွားနို့၊ ထောပတ်သီး၊ ထိုးမုန့်၊ ထန်းလျက် တို့ကိုလှူပေးပါ။
အကျိုးပေးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (ရ၊ လ၊ ဝ၊ မ) (၃၊ ၇၊ ဝ၊ ၅)
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် ရှေ့ပိုင်း(၆)လတွင် နေရာသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်များ သို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးကိုအားကိုး၍မရသော နှစ်ဖြစ်သည်။ အရာရာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါမှ အဆင်ပြေလာမည်။ ရည်ရွယ်ချက်ထားတိုင်းအတိုက်အခံကြုံပြီးမှ အောင်မြင် မည်။ လူမျိုးကွဲ၊ လူမျိုးခြားအကျိုးပေးမည်။ စတိုးဆိုင်များဖွင့်ခြင်း၊ စက်သုံးဆီရောင်း ဝယ်ခြင်း၊ ဆက် သွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရောင်းဝယ်ခြင်းများ ကောင်းမည်။ အများ ကိစ္စ၊ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်မှုများပြုလုပ်ပေးရတတ်သည်။ စိတ်လောကြီး တစ်ပါးသူ အကူအညီဖြင့်လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းများ ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။ အဆိပ်ရှိသော သတ္တဝါရန်မူခြင်းကြုံရတတ် သည်။ သတိတရားရှေ့ရှု၍ သွားလာဆောင်ရွက်ရမည်။ အင်္ဂါသား၊ သောကြာသားသမီးများ ဒုက္ခ ပေးတတ်သည်။ ရင်းနှီးသောသူများနှင့် မိမိအကြားအယူအဆသဘောထားမကိုက်ညီမှုများ ကြုံရ မည်။ ဆွေမျိုးများအိမ်သို့အလည်အပတ် သွား လာခြင်း၊ အမွေအနှစ်ရရှိတတ်သည်။ ဝေးကွာနေသူ များပြန်လည်ဆုံစည်းရကိန်းရှိသည်။ သားသမီးများ၊ သူငယ်ချင်းများ မိသားစုအတွင်း ဒုက္ခပေးတတ် သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ မိသားစု အတွက် ငွေကြေးကုန်ကျခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကြုံရမည်။ ပညာရေးတွင် မိမိရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုများ ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။ သို့သော် အိမ်တွင်းအပူကြောင့် ပညာအစွမ်း လျော့နည်း သွားတတ်သည်။ အလုပ်စာမေးပွဲ အင်တာဗျူးများတွင်လည်း ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်မည်။ ခရီးသွားလာရာတွင် ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုများနှင့် ကြုံရတတ်သည်။ ကျန်းမာ ရေးတွင် လေးဘက်နာ၊ အရိုးအကြောအဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အကျိတ်နာ၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းများ ခံစားရတတ်သည်။
ယတြာ။ ။ မိမိမွေးနေ့တွင် မေမြို့ပန်း၊ ပိတောက်ညွှန့်၊ ပိန်းပန်း၊ ရွှေပန်း၊ ရွက်လှများကို ငွေပန်းအိုး ဖြင့်ပူဇော်ပေးပါ။ ယပ်(၇)ချောင်းလှူပေးပါ။ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင် ရွှေဆိုင်းကပ်လှူပေးပါ။
အကျိုးပေးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (ပ၊ဖ၊ဘ၊မ)(၈၊၇၊၃၊၁၀)
ကြာသပတေးသားသမီးတို့သည် အခက်အခဲမည်မျှရှိစေဆောင်ရွက်စရာများ ရှေ့တိုး၍ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ (၁၆.၁.၂၀၂၀)မှစ၍ (၁၅.၃.၂၀၂၀)အထိ စီးပွားရေးများ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ယခုနှစ်တွင် ခရီးတိုခရီးရှည်များသွားရကိန်းရှိသည်။ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ သံထည်ပစ္စည်း၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အထည်အလိပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းများ အထူးအကျိုးအမြတ်ခံစားရမည်။ အရှေ့မြောက်အရပ်သို့ ရေလမ်းခရီး သွားခြင်းရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။ အထက်အကြီးအကဲ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အထူး ဂရုစိုက် ရမည်။ မင်းစိုးရာဇာများနှင့် စကားအငြင်းအခုန်ပြောရခြင်း၊ စိတ်သောကဝင်ခြင်းများရှိမည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် တနင်္လာနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများနှင့် တွဲဖက်ဆောင်ရွက် ခြင်းများ ဂရုစိုက် ပေးပါ။ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များအတွက် စကားများတတ်သော်လည်း မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုတို့ကြောင့် အဆင်ပြေချောမွေ့သွားတတ်၏။ အချစ်အတွက်ပေးဆပ်နေရသော သူဖြစ်နေတတ်သည်။ ကိုယ်ချစ်သလောက် ကိုယ့်အပေါ် တုံ့ပြန်မှုအားနည်းနေတတ်သည်။ အိမ် ထောင်ရှင်များသည်းခံခြင်းဖြင့် သာယာသော အိမ်ထောင် မှုကို ဖန်တီးရမည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာသင်ခရီးသွားလာရတတ်သည်။ ပညာရေးတွင် ဆရာကောင်းများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး မိမိရည်မှန်း ထားသောပန်းတိုင်ကို ဆွတ်ခူးရမည်။ ကျောင်း အတတ်ပညာသာမက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာများပါ အကျိုးပေးမည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အစားအသောက်မှားခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့ အပြားကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မီးယပ်၊ မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ။ ။ မိမိမွေးနေ့တွင် ပုတီးစိပ်၊ အဓိဌာန်ဝင်ခြင်းများဆောင်ရွက်ပါ။ သီးညွှန့်၊ သရက်ညွှန့်၊ ပေါက်ညွှန့်၊ အဝါရောင်သစ်ခွ၊ မြလေးပန်းများကို ဘုရားတွင်လှူပေးပါ။ သံပရာဖျော်ရည် ကပ်လှူ ပေးပါ။
အကျိုးပေးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (သ၊ဟ၊ဖ၊မ)(၉၊၅၊၁၊၆)
သောကြာသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် (၁၅.၁.၂၀၂၀)မှစ၍ (၁၅.၃.၂၀၂၀)အထိ စီးပွား ရေးများသတိနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ပုလဲ၊ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ စား သောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေများရရှိနိုင်သည်။ နေရာသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ လူသစ်၊ မိတ်သစ်များနှင့် ပူးတွဲလုပ်ခြင်းများ အကျိုး ပေးမည်။ မိမိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိသလောက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ထားတိုင်း အတိုက်အခံကြုံပြီးမှ အောင်မြင်မည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် စနေနှင့် တနင်္လာသားသမီးနှင့် တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဂရုစိုက်ပေးပါ။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဘာသာရေးကိစ္စ၊ အလှူအတန်းကိစ္စများ ကို ထူးခြားစွာအောင်မြင်လာလိမ့်မည်။ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတတ်သည်။ အမွေအ နှစ်ကိစ္စအတွက် ဆွေမျိုးများနှင့် အငြင်းပွားပြီး ဥပဒေနှင့်ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီး သူများရှိပါက ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရမည်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်း များဝင်မည်။ ပျိုရွယ်သူများအချစ်ကို ဖွင့်ပြော ရန် ဝန်လေးပြီး နှုတ်နှေးခြင်းကြောင့် တစ်ပါးသူလက်သို့ ချစ်သူပါသွားတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင် များ ရံဖန်ရံခါစကားငြင်းဆိုမှုများ ပတ်ဝန်း ကျင်ကြောင့် ပေါ်လာမည်။ မိသားစုအတွင်း ပြင်ပပြဿနာ များဝင်လာပြီး အပြောအဆိုခံရတတ်သည်။ စိတ်ပျံ့လွင့်နေမည်။ ကျန်းမာရေးကြောင့် ပညာရေးတွင် အနှောင့်အယှက် အနည်း ငယ်ရှိနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ဖျားနာခြင်း၊ အစားအသောက်မှားခြင်း၊ အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ လေနာရောဂါများဂရုစိုက်ရမည်။
ယတြာ။ ။မိမိမွေးနေ့တွင် အဖြူရောင်သစ္စာပန်း၊ အဖြူရောင်နှင်းဆီပန်း၊ သဇင်ပန်း၊ ဆီးညွှန့် (၁၁)ညွှန့်ဘုရားတွင်လှူပေးပါ။ မိမိမွေးနေ့တွင် ဆီမီး(၅)ခွက်လှူပေးပါ။ ရွှေထီး၊ ငွေထီး၊ တံခွန်၊ ကုက္ကားများလှူပေးပါ။ ပဲပြုပ်၊ ငချိပ်ပေါင်း ကပ်လှူပေးပါ။
အကျိုးပေးသော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (စ၊ဆ၊လ၊ဝ)(၃၊၈၊၂၊၅)
စနေသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် ကံကြမ္မာ၏မျက်နှာသာပေးမှုခံစားရမည်။ ဝေးကွာနေ သော အပေါင်းအသင်းများပြန်လည် ဆုံစည်းခွင့်ရမည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများ မိတ်ဆွေ သစ် ဖောက်သည်သစ်များနှင့် ဆက်ဆံရမည်။ ရပ်ဝေးတွင်သွားရောက်၍ လုပ်ငန်းခွင်များ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ ဆွေမျိုးများနှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ မိမိလုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝင်ရောက်စွက် ဖက်ပြီး ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှာတတ်သည်။ သူစိမ်းများအကျိုးပေးမည်။ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောခြင်း၊ ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူးချီးမြှင့်ခြင်း၊ ရာထူးတက်ကိန်းများရှိမည်။ မိမိပိုင်ဆိုင် သောပစ္စည်းများ ငှားရမ်းခြင်း ကိစ္စများသတိထားဆောင်ရွက်ရမည်။ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ကား၊ အခန်းအလဲအလှယ် အပြောင်းအလဲများ ရှိမည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများအတွက် ကြာသပတေး၊ အင်္ဂါသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အထူး ဂရုစိုက်ပေးရမည်။ ယခုနှစ်တွင် ဘုရားဖူးခရီးသွားလာခြင်း၊ ခရီးတိုခရီးရှည်များသွားရကိန်းရှိသည်။ ပျိုရွယ်သူများဝေးကွာနေသူများ ပြန်လည်ဆုံစည်းရကိန်းရှိသည်။ အချစ်ရေးတွင် မိတ်ဆွေသူငယ် ချင်းသဖွယ်ရင်းနှီးသူများနှင့် မေတ္တာရေးကိစ္စများပေါ်ပေါက် လာတတ်သည်။ စေ့စပ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းများ ရှိမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများကြုံမည်။ ကံစွမ်းအား၊ ဉာဏ် စွမ်းအားမြင့်မားနေပြီး ဝီရိယအားစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် မြင့်မားသော ပညာအဆင့်အတန်းရရှိနိုင်မည်။ ရောဂါ ဟောင်းများ ပြန်လည်ပေါ်တတ်သည်။ ကျန်းမာရေးတွင် ခြေထောက်နာခြင်း၊ အရေပြားရော ဂါ၊ ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းရောဂါများ၊ ဇက်ကြောတက်ရောဂါများ ခံစားရတတ် သည်။ နာတာရှည်ရောဂါများ ဝင်လာတတ်သည်။
ယတြာ။ ။ မိမိမွေးနေ့တွင် လက်ဖက်ညွှန့်၊ အုန်းညွှန့်၊ ရဲယိုညွှန့် (၁၁)ညွှန့်ပူဇော်ပေးပါ။ တန်ခိုးကြီး ဘုရားတွင် ရွှေဆိုင်း (၃)ဆိုင်းလှူဒါန်းပေးခြင်း၊ ထုံးသင်္ကန်းကပ်လှူပေးပါ။ လိမ္မော်ရည်ကပ်လှူပေးပါ။
အကျိုးပေးသာ အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများမှာ (အ၊စ၊န၊လ)(၂၊၇၊၉၊ဝ)
Post Views: 25,735
Previous Previous post: ထိုင်းလိဂ်-၁ က အောင်ကောင်းမန်ကို ခေါ်ယူဖို့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိစ္စ တိုင်ပင်နေ
Next Next post: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထိုင်းလိုဏ်ဂူကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းရေတပ်ရဲ့တပ်ကြပ်တစ်ဦးသေဆုံး
အပတ်စဉ်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကဏ္ဍ (၂၈-၇-၂၀၁၉ မှ ၃-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)
အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ ဆရာကင်္ကသူရဲ့စန္ဒသူရိယ နက္ခတ္တဝေဒဟောစာတမ်းကို ရိုးရာလေးပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၂၈-၇-၂၀၁၉ မှ ၃-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ) တွက်ချက်လမ်းညွှန်ပေးထားမှုကို ပုံတစ်ပုံချင်းစီမှာ Unicode/ Zawgyi version နှစ်မျိုးနဲ့ တွဲဖက်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ ယခုအပတ်အတွက် တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ စီးပွားရေး…
Published: July 28, 20199:58 am
အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကဏ္ဍ (၁၃-၁-၂၀၁၉ မှ ၁၉-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)
အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ ဆရာကင်္ကသူရဲ့စန္ဒသူရိယ နက္ခတ္တဝေဒ ဟောစာတမ်းကို ရိုးရာလေးပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Post Views: 3,657
Published: January 13, 20192:53 am Updated: February 7, 20191:17 pm
မကြာသောရက်ကဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ထံသို့ မတွေ့ရသည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်သည့် မိတ်ဆွေတစ်ဦးသည် အူယားဖားယားဖြင့် ရောက်၍လာတော့၏၊ “ လာရင်းကိစ္စက ဒီလိုရှိတယ် ဆရာကင်ရဲ့ . . . ကျွန်တော့်အလုပ်အကိုင် စီးပွားလည်း ပျက်နေတာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီ . .…
နယ်ပယ် ၆ ခုမှ ထူးချွန်သူများအား အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးကုသရေးတွင် ပါဝင်ကြသော အဖွဲ့အစည်းများကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ပေးအပ်ရန် Myanmar’s Pride Awards 2020 ကျင်းပ
Published: January 11, 20213:10 pm